Gudoomiye Yariisow oo Si kulul ugu hadlay Shacabkii Shalay lagu dilay Muqdisho. | Saadaal Media
Gudoomiye Yariisow oo Si kulul ugu hadlay Shacabkii Shalay lagu dilay Muqdisho.
Nov 7, 2018 - jawaab
War Kooban oo uu ku daabacay Bartiisa Twitter-ka Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa Waxaa uu kaga hadlay dhacdii shalay ka dhacay Isgooska Ex-kontorool ee Magaalada Muqdisho.
Gudoomiye Yariisow ayaa shaaca ka qaaday inuu la kulmay taliyaha Ciidanka AMISOM, islamarkaana waxaa uu kala hadlay sidii loo soo qaban lahaa askartii ka dambeysay dadkii Shacabka ahaa ee shalay lagu dilay Degmada Hilwaa ee Gobalka Banaadir.
“Taliyaha AMISOM ayaan kala hadlay dhacdadii shalay ciidamo AMISOM ay ku dileen dad rayid ah degmada Heliwaa, una sheegay inaan la aqbali karin shacab in wax loo geysto.”
Sidoo kale Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa sheegay in Taliyaha Ciidanka AMSIOM uu ka dalbaday inuu baaris dhab ah ku sameeyay sida uu u dhacay kiiska, islamarkaana gacanta lagu soo dhigo askartii dhibaatada u geysatay Dadka Shacabka ahaa.
“ Waxaana ka dalbaday inuu baaris dhab ah ka sameeyo, Waxaa uuna ii ballanqaaday in AMISOM ay qoysaskii dhibaatadu soo gaartay ay la kulmayaan, tallaabo adagna laga qaadi doono cidii falkaas ku kacday” Sidaasi ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka.
Shalay ayay aheyd markii kolonyo ka tirsan AMISOM ay dad Shacab ah ku dishay degmada Hilawaa ee Gobalka Banaadir.